Artista Kyrgyz iray miantso ny tovovavy ‘hampijoro ny fahafahany manokana’ ao anatin’ny hirany iray malaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2018 6:27 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, русский, 繁體中文, Ελληνικά, English
Pikantsary avy amin'ny lahatsarin'i Zere ‘Kyz’.
Nivoaka ampahibemaso tany Kyrgyzstan tamin'ny hira iray miaro ny zon'ny vehivavy mba hiakanjo araka izay tiany ilay tanora artista Zere Asylbek.
Raha nanao izany izy dia nametraka ny toerany teo amin'ny adihevitra mafana teo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisampirenena.
Ny hira Kyz, izay midika hoe ‘tovovavy’ amin'ny teny Kyrgyz no hira voalohany noraiketin'i Zere. Raha nanontanian'ny sampan-draharaha amin'ny teny Kyrgyz tao amin'ny RFE/RL i Zere tamin'ny 16 Septambra no nilaza fa tsy mihevitra ny tenany ho mpiangaly mozika izy fa toy ny “tia mamorona amin'ny endrika malalaka indrindra”.
Ny hira Kyz, hoy izy, dia natao anasongadinana fa raha samy manana ny faniriany manokana ny tsirairay dia “tokony ho ekena ny fanirian'ny olon-kafa, na farafaharatsiny ankatoavina.” [any amin'ny fantsona misy azy ihany no mandeha ny lahatsary eto ambany, tendreo raha hijery azy]
Ity ny nandikana ny tononkira ara-bakiteny.
Tiako handeha ny fotoana, tiako ho avy ny fotoana
Izay tsy hitenenan'izy ireo intsony ny amin'ny fomba hiainako ny fiainako
Izay tsy hilazan'izy ireo amiko hoe “Ataovy izao” “Aza manao izao”
Nahoana aho no tsy maintsy manao izay tianareo atao [amiko], na araka izay tian'ny ankamaroan'ny olona atao [ahy]
Olombelona aho – izao no fahafahako miteny .
Manaja anao aho, manaja ahy ianao.
Ry namako, avia akia hiaraka amiko,
Hamorona ny fahafahantsika isika.
Handeha ny fotoana, ho avy ny fotoana,
Tsy hisy olona hiteny amiko hoe “Aza manao an'iny”, “Aza manao an'ity”,
Aza mibedibedy ahy toy izany
Miresaka inona moa ity hira ity?
Ao Kyrgyzstan, niteraka resabe tato ho ato ny akanjon'ny vehivavy ifanandrinan'ireo mpandala ny nentin-drazana sy ny lahika tamin'ny firongatry ny Islamo kanefa mbola mafana ny ady ara-tsosialy momba ny hoavin'ity firenena Sovietika teo aloha ity.
Nanondraka solika teo amin'ny afo kitay ny filoham-pirenena teo aloha Almazbek Atambayev tamin'ny 2016 rehefa nanohana ny andian-tsora-baventy maromaro izay nanontany hoe ” ho aiza (ny vahoaka Kyrgyz)?” izy.
Nampitaha ny fironana vao haingana nankany amin'ny niqab izay tsy mirona any amin'ny akanjo Kyrgyz nentim-paharazana tany amin'ny faritra sasany tao amin'ny firenena ny sora-baventy izay naparitaky ny vondrona tia tanindrazana iray.
Nahazo fanehoan-kevitra maneso sady manaika amin'ny endrika sora-baventy taty aoriana izany ka mampiseho vehivavy Kyrgyz manao zipo fohy sy kilaoty fohy teo amin'ny toeran'ireo vehivavy mitafy niqab.
Nantsoin'i Atambayev ho “smarty-pants.” (tsara silipo) ny mpanoratra ny sora-baventy faharoa.
“Nanao zipo fohy hatramin'ny taompolo 1950 ny vehivavintsika, ary tsy nieritreritra ny hanao fehikibo mitondra baomba mihitsy ry zareo”, hoy i Atambayev.
Naverin'ny mpanao politika tany an-kafa ny fanehoan-keviny manamaivana ny akanjo Islamika, anisan'izany ny sekreteran'ny raharaham-bahiny Britanika teo aloha Boris Johnson tamin'ny fiandohan'ity taona ity.
Sora-baventy iray niteraka adihevitra napetraky ny vondrona tia tanindrazana tany Bishkek izay miantso ny vehivavy handà ny niqab ho tsy nasionaly ary avy eo napetraka nanerana ny firenena taorian'ny nahazoany fankatoavana avy amin'ny mpitondra teo aloha Almazbek Atambayev. Norangotina na nodorana ny sasany tamin'ireo sora-baventy. Sary avy amin'ny Sputnik.kg. Nahazoana alalana.
Valin'ny sora-baventy voalohany. Sary avy amin'ny Kaktus Media. Nahazoana alalana.
Tamin'ny fomba manaitra, nanasongadina ireo vehivavy mitafy akanjo mampiseho ny fahasamihafana ao Kyrgyzstan ny lahatsarin-kiran'i Zere nalefa voalohany. Ary mazava ho azy fa tsy nahafaly ny olona ny hafatra.
Amin'izao fotoana anoratana izao, nahasarika mpitsidika manodidina ny 120.000 ny lahatsary tao anatin'ny efatra andro, isa mahavariana raha heverina fa firenena manana mponina miisa 6 tapitrisa monja i Kyrgyzstan ary amin'ny fiteny Kyrgyz ny hira fa tsy amin'ny fiteny faharoa ao amin'ny repoblika dia ny teny Rosiana.
Hatramin'ity fotoana nanoratana dia efa nahazo ‘ekeko’ miisa 2.000 ilay lahatsarin-kira ary ‘tsy ekeko’ miisa 5.500. Maro tamin'ireo fanehoan-kevitra tao amin'ny Facebook no nanasongadina rikoriko ary nankahala ilay mpihira 19 taona mihitsy aza.
Lohahevitra mafana tao Kyrgyzstan tamin'ity faran'ny herinandro ity: mpihira 19 taona namoaka horonantsary feminista manao tati-nono sy palitao miaraka amin'ny hafatra amin'ilay hoe “tsy misy hidiranareo izany”. Nitsara ary nilaza ny tsirairay hoe ‘eny, hira mahafinaritra, kanefa tsaratsara kokoa raha hafa ahay ilay fomba fitafy .’ Eh, tsy misy hidiranareo izany e.
Raha nanoratra tao amin'ny Facebook fotoana fohy taorian'ny famoahana ilay lahatsary, nilaza ny rain'i Zere Asylbek, Asylbek Zhodonbekov fa sady nahazo fankasitrahana izy no nahazo fitarainana avy amin'ny namana sy ny olom-pantany.
Nanamarika i Zhodonbekov fa nanjary nirona nankany amin'ny fikatrohana ara-politika i Zere taorian'ny namonoana ilay mpanambady nalaina an-keriny izay novonoin'ny mpaka an-keriny azy ihany tao amin'ny tobin'ny polisy raha teo am-piandrasana ny fanoratana ny fijoroany vavolombelona manenjika io lehilahy io izy tamin'ny volana Mey.
Niteraka hetsi-panoherana ity famonoan'olona mampalahelo ity manoloana ny tsy fahombiazana amin'ny fampiharana ny lalàna ao amin'ny firenena izay ahitana tovovavy an-jatony nalaina an-keriny isan-taona ary “nisy fiantraikany lehibe teo aminy”, hoy izy.
Tena nasiaka ny sasany tamin'ireo hafatra voarain'i Zhodonbekov. Nampitaha an'i Zere tamin'i Baba Yaga, mpamosavy iray tamin'ny angano Rosiana, mihitsy aza ny olom-pantatra iray. “Tena zanakao vavy ve io ?” Hoy ilay nanontany.
“Eny, zanako vavy i Zere ,” hoy i Zhodonbekov nanoratra tao amin'ny lahatsorany. “Zanakavavy malalaka fisaina amin'ny Kyrgyzstan afaka.”